Tag: tirakoobka fiidiyowga » Martech Zone
Tag: tirakoobka fiidiyowga
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Wax soo saarka fiidiyowgu waa mid ka mid ah xeeladaha suuqgeynta ee inta badan lagu qiimeeyo markay tahay ROI. Fiidiyow soo jiidasho leh ayaa ku siin kara awood iyo daacadnimo bani'aadamnimadaada astaan ​​u ah isla markaana ku riixda rajadaada go'aanka iibsiga. Waa kuwan qaar ka mid ah tirakoobyada cajiibka ah ee la xiriira fiidiyowga: Mid ka mid ah Waxsoosaarka ayaa soo saaray muuqaalkan faahfaahsan, Cabbiraadda ROI ee Ololaha Suuqgeynta Video-ga Waxay faahfaahinaysaa cabirrada ay tahay inaad kormeerto si aad u horumariso suuqgeynta fiidiyowgaaga 'ROI', oo ay kujirto tirinta aragtida,
YouTube: Waa maxay Istaraatiijiyadaada Fiidiyowga ee halkaas?
Axad, Juun 16, 2017 Axad, Juun 16, 2017 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Waxaan had iyo jeer diirada saarnaa nusqaamaha markay timaado istaraatiijiyada suuqgeynta digital'ka ah ee macaamiisheena. Mashiinnada raadinta ma aha oo keliya marin loogu talagalay ganacsiyada iyo macaamiisha si ay u helaan magacyada ay raadinayaan, algorithms sidoo kale waa tilmaame aad u sarreeya oo ah awoodda astaanta internetka. Markaan falanqeyneyno waxyaabaha dareenka u horseedaya astaanta, waxaan isbarbar dhigeynaa waxyaabaha ku jira barta tartame kasta si aan u aragno waxa ay ku kala duwan yihiin. Marar badan, mid ka mid ah kuwa kala duwani waa
Arbacada, February 22, 2017 Arbacada, February 22, 2017 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Waxaan ku qabanay kulan heer gobol ah podcasters-ka xafiiskeena si aan ugala hadalno faafitaanka fiidiyowga ee Podcasting-ka. Waxay ahayd dood la yaab leh - laga bilaabo teknolojiyad cusub, caqabado farsamo, ilaa xeelado dhab ah oo fiidiyoow bulsheed ah. Wadahadaladaas midkoodna lama waydiinin su'aasha la waydiiyay, miyay tahay inaan fiidiyoow sameyno? Saas ma aha, waxay ahayd wax walba oo ku saabsan sida aan u fulin karno fiidiyowga si aan ula socono dadaallada faylalka sida ugu wax ku oolka badan ee suurtogalka ah. Sida hal podcaster, Chris Spangle, maqal iyo muuqaal ah
Waa maxay sababta Video Video-ga uu u leeyahay mudnaan iyo 5 nooc oo fiidiyowyo ah oo ay tahay inaad soo saarto
Khamiista, Febraayo 18, 2016 Arbacada, February 17, 2016 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo 2015 wuxuu ahaa sanad rikoodh jabinta fiidiyowga sheyga, oo leh muuqaalka muuqaalka ayaa kor u kacay 42% laga bilaabo 2014. Taasi maahan sheekada oo dhan, in kastoo. 45% dhammaan muuqaalka fiidiyowga ayaa ka dhacay aaladda moobaylka. Xaqiiqdii, rubucii ugu dambeeyay ee 2015,. Tani iyo xog kale oo lagu bixiyay Warbixinta 'Invodo's 2015 Video Video Benchmarks Report' waxay leeyihiin dhammaan suuqgeyaasha cudurdaarrada ay u baahan yihiin si ay u hirgeliyaan istiraatiijiyad fiidiyoow ah… isla markaaba. Waxaan la shaqeyneynay dhammaan macaamiisheenna si aan u hubinno in istiraatiijiyadooda content